‘म एक गृहिणी : अनलाइन सेक्स च्याटकी पारखी’
म एक ३६ वर्षे गृहिणी हुँ । मलाई थाहा छ गृहिणी शब्दमा केही विशेषता छैन । निकै पट्यार लाग्दो हुन्छ । तर यो वास्तविकता हो । म १५ वर्षदेखि विवाहित छु । हाम्रा जुम्ल्याहा सन्तान...
मध्य त्रिशुली गंगा आयोजना रोक्ने वा नयाँ घाट खोज्ने ?
माधव लामिछाने समिर २०७५ पौषको पहिलो साता नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र परफेक्ट इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रा.लि. बीच १९.४१ मेगावाट क्षमताको मध्य त्रिशुली गंगा जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता पिपिए सम्पन्न भएको...
अपराधीलाई उन्मुक्ति कहिलेसम्म ?
उत्तम बि.क. हिजोआज नेपालमा दिनै पिच्छे अनौठो किसिमका घटनहरु घट्न थालेका छन । गाउघर छरछिमेक कोही कसैको बिस्वास गर्न नसकिने अबस्था सृजना भएको छ । पुलिस प्रसाशन देखी आम नागरिक कसैको पनि कसैले बिश्वास...
नेविसंघको इतिहास र रसुवा
शैलेश पौडेल- चार दसकभन्दा लामो इतिहास बोकेको नेपालको सबैभन्दा पुरानो विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ आफैँमा एउटा इतिहास हो । यसको स्थापना यस्तो समयमा भएको थियो, जतिबेला जनताको वाक स्वतन्त्रता खोसिएको थियो र शान्तिपूर्ण आन्दोलन...
रसुवा यात्रा : सम्झना र अनुभूति
डा. धनप्रसाद सुवेदी पहिलो पटक २०७२ साउनमा म रसुवा आएको थिएँ । त्यति बेला भूकम्पले रसुवाको धर्ती र रसुवालीको मन–मस्तिष्क दुबै चिराचिरा पारेको थियो, धर्ती र मन दुवैमा कहिल्यै नपुरिने घाउ थियो अनि बारम्बारको पराकम्पनको...
रसुवा प्राज्ञिक समाज :औचित्य र उपादेयता
पं. नारायण देवकोटा परिचय रसुवा जिल्लाका स्नातकोत्तर वा सो सरह र सोभन्दा माथिको औपचारिक योग्यता प्राप्त ‘स्कलर्स’हरूको साझा संस्था नै रसुवा प्राज्ञिक समाज हो । विश्वविद्यालय तहमा अध्ययनरत र अध्ययन पूरा गरेका साथीहरू बीचको प्राज्ञिक छलफल,...
नेपाली कला र सँस्कृतिको जगेर्ना गरौ ।
उत्तम वि.क. बैदेशिक रोजगार तथा बिभिन्न कामका लागी झण्डै बीस लाख नेपालीहरु बिदेशमा रहेको अनुमान बिभिन्न तथ्यांकहरुले देखाएको छ । देश बाहिर रहेर पनि नेपालीपन र नेपाली मौलिकता भने उनीहरुले भुलेका छैनन् । नेपाली कला,...
बिकसित र अपराध मुक्त देश नेपाली जनताको चाहना
उत्तम विक देशमा यतिबेला वामपन्थीहरुको बहुमतको सरकार छ । नेपालको इतिहास मै पहिलो पटक वामपन्थीहरुको बहुमतको सरकार भएको बेला शताब्दीऔं देखिको राजनैतिक कुसस्कारको अन्त्य गर्न पनि अहिलेको सरकार सक्षम हुनेमा नेपाली जनताहरु आशावादी देखिन्छन । देशमा...
वर्तमान शिक्षा, विद्यमान समस्या र दृष्टिकोण
उदय घिमिरे- नेपाल प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण देश हो । नेपाललाई सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रुपमा सम्पन्न बनाउनु वर्तमान शताब्दीको माग हो । छिमेकी मुलुकको पाठ्यपुस्तक कपी गरी उच्च तहसम्म नेपालको संस्कृति र भूगोल सुहाउँदो...
समाजवादी शिक्षाको अवधारणा
उदय घिमिरे- समतामूलक, समावेशी र गुणस्तरीय शिक्षा जसले जागिरे मानसिकता होइन जागृत र श्रमप्रेमी समुदायमुखी नयाँ मानिसको निर्माण गर्छ । श्रमलाई सम्मान गर्दै व्यक्तिवादी हितभन्दा पर रहेर समुदायको हितगर्ने विवेकशील मान्छे निर्माण गर्छ समाजवादी शिक्षाले...